ओलीजी र प्रचण्डजीले जे भने, त्यही हुने हो, मार्सी चामल खायो भन्दैमा सम्बन्धन दिने ? | NepalDut
ओलीजी र प्रचण्डजीले जे भने, त्यही हुने हो, मार्सी चामल खायो भन्दैमा सम्बन्धन दिने ?
संसद, समिति, उपसमितिचाहिँ सार्वभौम हुन् रे ! अहिले के छ भनेदेखि, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे राष्ट्रपति हुन्, चाहे मन्त्री हुन्, चाहे सांसद हुन्, जे हुन्, अहिले उनीहरु नेपाली जनताको मालिकका रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । मालिक । राजाका रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । उनीहरु भनेका त तीन करोड नेपालीका नोकर हुन् । म त सेवक पनि भन्न चाहदिनँ कि नोकर हुन् । र, सार्वभौम भनेको को रहेछ भने ओलीजी र मन्त्रीहरु रहेछन् । केही हदसम्म प्रचण्डजी रहेछन् ।
शीर्षस्थ नेताको कृपा भयो भनेर अस्पताल चलाएको छ, के चलाएको छ । एउटा माफिया भयो, डन भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? कुर्न पर्‍यो । पूर्वाञ्चल हो भनेदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय छँदैछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइहाल्छ । हो, इलाममा हो भने त्यहाँ खोल न ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र तेथ्रथुमका मान्छेको यही अवस्था छ । उनीहरु उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपर्छ । त्यहीँ अस्पताल बनाइदिएको भने के हुन्थ्यो ? भनेपछि ओलीजी, योगेश भट्टराईजी, खगराज अधिकारीजी, आफूलाई साम्यवादी भन्ने तर, यिनीहरु जनता मार्न माफियासँग लागेका छन् । जनतामारा, विद्यार्थीमारा हुन् यिनीहरु । सर्वहारावादी भन्छन्, तर सर्वहारामारा हुन् यिनीहरु ।
४ नम्बरमा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर हामी लडिरहेका छौं, खगराजजीलाई त्यो मतलब छैन । भनेपछि, यो सरकारमा यिनीहरु माफियाका लागि आएका हुन् कि जनताको काम गर्न आएका हुन् ? कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएको ७ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म खोल्न दिएको छैन । अनि हामीले त्यहाँ गएर लड्नुपर्छ ।
मलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ । के थाहा छ भने नेताहरु यस्तै हुन् । म धेरै भुक्तभोगी भैसकेको छु । उनीहरुसित गएर कुरा गर्न गयो, पछि गएर मिडियामा के भन्छन् भने, डाक्टर साबसित कुरा भयो, उनी आˆनो स्वार्थ हेरेर सहमत हुनुभयो भन्छन् । मैलेे हैन, यिनीहरुले गलत भने भनेर कतिलाई भन्दै हिँड्ने ? मैले यस्तो धोका धेरैपटक खाइसकेको छु ।